दमक ५ मा हात्तीको उपद्रो बढ्दै -
लामो समय देखि दमकमा रहेको हंसे दुम्से सामुदायिक बन आसपास क्षेत्रमा जंगली हात्तीले उदण्ड मच्चाउने कार्य बन्द भएको छैन ।
केही दिन अघिमात्र दमक वडा नं. ५ र ७ को आधा दर्जन बढी घर तथा पसलहरु भत्काएर क्षति पुर्याएको छ । यता आज पनि दिउँसै दमक वडा नं. ५ को चेतना टोल विकास क्षेत्रका दर्जन बढी कृषकहरुको धान, उखु, केरा खाएर र भाँचेर नष्ट गरेको पीडित गाउँका अगुवा नैनकुमार राईले बताए ।
राईका अनुसार दमक वडा नं. ५ का जंगल छेऊका अधिकांश कृषकहरुको पाकेको धान बाली र घरमा जम्मा गरेको अन्नबालीमा हात्तीले नष्ट पु¥याएको छ । २ सातादेखि बनमा रहेको हात्ती धपाउँन गाउँलेहरुले सरोकारवाला निकाय जिल्ला बन कार्यालय, सामुदायिक बन कार्यालयमा गुहार माग गर्दै आए पनि हात्ती धपाउँन कसैले चासो नदेखाए पछि गाउँलेहरु थप पीडित बन्दै गएका छन् । यता शरणार्थी शिविर वेलडाँगी २ को सेक्टर एफमा समेत हात्तीले दुःख दिन थालेको शसस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलबहादुर बडुवालले बताए । बडुवालका अनुसार आइतबार राती समेत गस्ती परिचालन गरी हात्तीलाई धपाइएको बताइएको छ ।
हात्तीको क्षतीबारे जिल्ला बन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेश महत्तोसँग फोन मार्फत गुनासो राख्दा तत्काल हात्तीको व्यवस्थापनका लागि टोली खटाइने बताइएको थियो । तर हात्तीको उपद्रो दिन प्रति दिन बढिरहँदा कसैले चासो नदेखाए पछि पाकेको अन्नबाली कृषकहरुले थन्काउँन नपाउँने स्थिति देखिएको पीडित गाऊँलेहरुले बताएका छन् । केही दिन अघि मात्र हात्तीले घरको पर्खाल भत्काउँदा दमक वडा नं. ५ की संगिता पौडेल गम्भिर घाइते भएकी थिइन् ।